१५ वर्षीय बालकले जिते १२ करोड पुस्कार ! - Everest Dainik - News from Nepal
१५ वर्षीय बालकले जिते १२ करोड पुस्कार !
बेलायतमा एक १५ वर्षीय बालकले अनलाइन खेल खेलेर करिब १२ करोड बराबरको पुरस्कार जितेका छन् । जेडन एशमैनले ‘फर्स्ट फोर्टनाइट वर्ल्ड कप’मा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्दै उक्त रकम जितेका हुन् । फोर्ट नाइट एक अनलाइन बैटल गेम हो । संसारभरमा यो खेल २५ करोडभन्दा बढी मानिस खेल्छन् ।
जेडनले यो खेल डच सहयोगी डेवे जोङसँग खेलेका थिए । दुवैले करिब २४ करोड पुरस्कार पाएका थिए । पुरस्कार पाएपछि जेडनले भने, ‘मेरी आमा धरै जसो मसँग रिसाउनु हुन्थ्यो । उहाँलाई लाग्थ्यो कि म कोठामा बसेर ८-८ घण्टा गेम खेल्थे । म आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेको थिएँ । एक पटक आमाले रिसमा एक्सबक्स (भिडियो गेमको कन्ट्रोलर) फुटाइदिनु भएको थियो ।’
यो अनलाई गेम करिब तीन दिन चल्यो । यसको आयोजना न्यूयोकरको टेनिस स्टेडियममा गरिएको थियो । यसमा एक महिनाको अवधिमा सय जना खेलाडी चुनिएका थिए । जसमा १२ देखि ४० वर्षका खेलाडी सहभागी रहेका थिए । एजेन्सी
ट्याग्स: जेडन एशमैन, पुस्कार